Famerenana sy fanamarihana ny The Yellow Rain avy amin'i Julio Llamazares - Ikkaro
firosoana >> boky >> Orana mavo
Ny prosa an'i Llamazares dia mahatalanjona. Nandritra ny fotoana namakiako dia tadidiko fa nieritreritra aho fa tsy afaka manoratra toa izao mihitsy tamin'ny fiainako. Betsaka ny boky izay toa mora soratana, na dia tsy mbola misy aza. Tsy misy izany na toa izao.
Orana mavo mitantara ny famoizan'ny tanàna ny tanànan'ny Pyrenees Aragonese ny mponina, mandra-pahatapitry ny iray sisa, Andrés. Miaraka amin'ny fahatsiarovana an'i Andrés dia hiainantsika isika satria tsy nisy olona onenana sy niainany isan-karazany tamin'ny lasa izay hahatonga antsika hahatakatra ny zava-misy ankehitriny sy hiaraka aminy amin'ny fitokana-monina rehetra.
Boky mampalahelo izy, mampalahelo tokoa, nanjary tandindon'ny fifindra-monina ambanivohitra, an'i Espana poak'aty, fa hitako ho boky momba ny fanirery izany. Ny manirery izay poizina sy mamono. Nahazo ny laharana faha-2 tamin'ny laharam-bokiko mampalahelo izay mitohy hatrany hatrany ambony Fasan'ny afomanga navoakan'i Akiyuki Nosaka.
Ny rivo-piainana noforonina tao amin'ilay tantara dia manindry ny fonao, manala anao ary manenina anao. Satria tsy fanirery izany araka ny hitantsika ohatra ao amin'ny Mandrehitra afo avy amin'i Jack London, izay natiora natiora. Manirery izay maharary.
Raha sahy ianao, dia boky mora vidy izany azo alaina latsaky ny 6 €.
Gaga aho rehefa efa nilaza ny fombany, izay toy ny prosa tononkalo, toy ny famakiana tononkalo tena kanto sy be pitsiny miaraka amin'izay.
Nanomboka tamin'io alina io dia ny harafesina no hany tadidiko ary ny hany sehatr'ilay fiainako. Nandritra ny dimy na enina herinandro dia namafa ny arabe ny ravin'ny popla ary nampahiratra ny jamba sy niditra tao amin'ny fanahiko toy ny tao amin'ireo efitrano foana tao amin'ireo trano. Dia nitranga ilay zavatra Sabina. Ary, toy ny hoe ny tanàna dia noforonina tsotra tamin'ny fahitako azy, ny harafesina sy ny hadinoko dia nilatsaka taminy tamin'ny heriny rehetra sy ny habibiany rehetra. Ny olon-drehetra, na ny vadiko aza, dia nandao ahy, maty i Ainielle nefa tsy afaka nanandrana nanalavitra azy akory aho ary, teo antenatenan'ny fahanginana, toy ny aloka hafahafa roa, nifampijery foana izahay sy ilay alika, na dia fantatro aza samy tsy nisy valiny notadiavinay.
Misy andalana manana hery bebe kokoa, manaitra, izay mametraka ny fanaintainana ao anatinao, fa satria hanambara ny ampahany manan-danja amin'ny teti-dratsy dia tsy hametraka azy ireo aho.
Sady nitady azy foana aho nanodidina ny trano: tao amin'ny efitrano ambany rihana sy an-dakozia, tao amin'ny efitrano fitahirizana fitaovana, tao an-dakozia sy tao an-tampon-trano, tao amin'ny lakaly. Tsy hitako tao amin'ilay vavahady koa ilay alika. Ny sisa tavela amin'ny lambo dia mbola nahantona tamin'ny vatan-kazo, namelona ny rany ny pisinina namaky teo ambaniny ny fotsy mangatsakatsaka.
Avelako ny sary sasantsasany izay efa nanandrana ahy ary tsy nofidiko ho fonony. Tamin'ny farany dia nofidiko Ilay niseho ho olona, ​​niaraka tamin'ny famantaranandro ho famantaranandro ny famantaranandro ary nofonosina jiro mavo toy ny orana mavo io.
Ahoana ny fandehan'ny fotoana
Mamonjy ity sombin-tantara ity aho izay ilazany amintsika ny fandehan'ny fotoana ary heveriko fa mahatalanjona.
Mikoriana foana ny fotoana rehefa mikoriana ny renirano: melankolika sy equivocal tamin'ny voalohany, mirohondrohona rehefa mandeha ny taona. Toy ny renirano dia manjary voafandrika eo anelanelan'ny atody malefaka sy ny fofon'ny fahazazanao. Tahaka azy dia mianjera amin'ireo lohasaha izy ary mitsambikina izay manamarika ny fiandohan'ny haingam-pandeha. Mandra-pahatongan'ny faha-roapolo na telopolo taona dia mino ny olona fa ny fotoana dia renirano tsy manam-petra, zavatra hafahafa izay mamelona ny tenany ary tsy lany mihitsy. Fa tonga ny fotoana izay ahitan'ny olona ny famadihana ny taona. Nisy fotoana tonga foana - ny ahy nifanindry tamin'ny fahafatesan'ny reniko - izay, tampoka teo dia nifarana ny fahatanorana ary niempo ny fotoana toy ny lanezy lanezy tototry ny varatra. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia manomboka mihafohy ny andro sy ny taona ary lasa etona mandalo ny fotoana - toy ny fihenan'ny lanezy ihany - manarona ny fo tsikelikely azy ary matory. Ary rehefa maniry ny hahatsapa izany isika dia tara loatra vao manandrana mikomy.
Misy i Ainielle
Na dia voaforona aza ny teti-dratsy sy ny tarehin-tsoratra, dia misy ny tanànan'i Ainielle izay nametrahana ilay tantara.
Tamin'ny taona 1970, nilaozana tanteraka izy io, saingy mbola nanohitra ihany ny tranony, lo amin'ny fahanginana, eo afovoan'ny hadino sy ny lanezy, any an-tendrombohitra Pyrenees of Huesca izay antsoin'izy ireo hoe Sobrepuerto.
Ho azy, ny boky Ainielle, ilay fahatsiarovana mavo, nataon'i Enrique Satué, dia mitantara ny tantaran'i Ainielle.
rohy aiza no ahitantsika ny sarin'i Ainielle
3 Ahoana ny fandehan'ny fotoana
4 Misy i Ainielle